Tafandositra Tamin’ny Fampanambadiana Ankizy ao Malawi i Memory Banda, fa Tsy Afa-Bela kosa ny Rahavaviny Fony 11 Taona · Global Voices teny Malagasy
Tafandositra Tamin'ny Fampanambadiana Ankizy ao Malawi i Memory Banda, fa Tsy Afa-Bela kosa ny Rahavaviny Fony 11 Taona
Voadika ny 18 Marsa 2015 2:40 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, فارسی, বাংলা, Nederlands, čeština , English
Memory Banda, 18 taona, misolovava ireo niharan'ny fampanambadiana zaza niresaka tamin'ny mpikambana iray ao amin'ny parlemanta Malawita. Fahana: Let Girls Lead
Ity lahatsoratra sady tatitra amin'ny radio avy amin'i Joyce Hackel ho an'ny The World ity dia tafiditra ao amin'ny tetikasa Across Women's Lives [Manavatsava ny Fiainam-Behivavy] nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 12 Marsa 2015, ary navoaka indray noho ny fifanarahana mifampizara vontoaty.
Iray amin'ireo tsara vintana i Memory Banda
Niezaka ny nandositra ilay rafitra mampiditra ny atsasaky ny zazavavy ao amin'ny firenena atsimon'i Afrika misy azy hanambady aloha, sy lasa reny alohan'ny fotoana, ity zazavavy 18 taona ity.
Fa tsy mba tsara vintana toa azy ny rahavaviny.
Vao 11 taona monja i Mercy dia bevohoka nandritra ny “lanonam-panadiovana” ara-pananahana nentim-paharazana izay natao hanomanana ny zazavavy somondrara ho any amin'ny fiainam-behivavy sy ny fanambadiana. Noterena i Mercy hanambady ny lehilahy izay nahabevohoka azy, saingy tsy naharitra ny mariaziny, ary tahaka izany ihany koa tamin'ny lehilahy iray hafa nanaraka an'io. 16 taona ankehitriny i Mercy ary efa telo ny zanany nefa kely ny fanabeazana azony, mbola mihantona ny nofinofiny ho lasa mpampianatra.
Taona vitsivitsy lasa izay i Memory no nihaona tamin'ny Girls Empowerment Network [Tambajotra Fanomezana hery ny Zazavavy] , ONG iray miorina ao Malawi efa niezaka an-taonany maro hahatonga ny mpanao lalàna hamaha ny olan'ny fampanambadiana ny zazavavikely. Ny tanora toa an'i Memory ihany no afa-mampisokatra ny zazavavy hafa any ambanivohiny hiresaka. Ny atrikasam-panoratan'ny vondrona dia niafara tamin'ny fijoroana vavolombelona mampiaiky volana antsoina hoe “I Will Marry When I Want To!” [Hanambady amin'ny fotoana tiako aho] nentin'i Memory sy ny tariny hanokatra fomba fijery miteraka adihevitra lehibe ao Malawi momba ny fampanambadiana ny ankizikely: dia ny fomba fijerin'ireo ankizy mihitsy.
Memory Banda, amin'ny farany havanana, miaraka amin'ireo tanora mpikatroka nalamin'ny Let Girls Lead. Fahana: Let Girls Lead
Mino i Memory fa ny fijoroana vavolombelona no hanery ny mpanao lalàna hamarana hatreo ny fodiana fanina fa lasa miely fatratra ny fampanambadiana ny ankizikely ao amin'ty firenena mandala ny nentin-drazana ity. “Tratra ry zareo,” hoy izy. Lasa karazana mpandresy lahatra any ambadika izy amin'ny fametrahana lalàna vaovao ao Malawi ho 18 taona ny olona iray vao afa-manambady ara-dalàna. Taorian'ny dimy taona niadian-kevitra, dia nolaniana izany tamin'ny volana febroary lasa teo.
Ankehitriny dia miteny i Memory fa ny fampiharana ny lalàna indray izao no vahàna. “Izany no hametraka fahasamihafana lehibe sy fiantraikany lehibe, saingy tsy tontosa izany raha tsy misy ny fomba tsara kokoa amin'ny fametrahana ny fandaharanasa hahatratra olona maro kokoa amin'ity lalàna vaovao ity.”
Na izany aza, tsy ara-dalàna ihany koa ny mariazin'ny rahavaviny tamin'ny faha-11 ny taonany, saingy tsy nanakana ny fanimbana azy izany. Nandrisika ny rahavaviny i Memory mba tsy hijanona antenantenany amin'ny faniriany ho lasa mpampianatra. “Mino aho fa mbola manambintana izy ny hianatra indray,” hoy ny filazany.
Ary hitan'i Memory ny fisokafana vaovao any amin'ny miafin'ny fiarahamonin'i Malawi rehefa miezaka ny hanabe ny zazavavy momba ny fananahana sy momba ny zony izy. Fantany fa efa vonona ny tsy hamela ny zanany hizotra any amin'ny lalam-piainana nodiaviny ny rahavaviny. Feno dimy taona ankehitriny ny vavimatoan'i Mercy, efa ho atsasa-dalan'ny taona nanambadian'i Mercy.
“Fantatr'ilay zazavavy kely ny lala-nodiavin'ny reniny. Ary matoky aho fa manampanantenana veve kokoa ami'ny hoaviny izy,” hoy i Memory.
Raha te-hanampy ny tolon'ny Girls Empowerment Network ho amin'ny fitovian-jo sy ny rariny ao Malawi ianao, na te-hahalala bebe kokoa tamin'ny asan-dry zareo, dia azonao jerena ny tranonkalan-dry zareo: http://www.genetmalawi.org/
2 andro izayNizeria